5G Nokia dị ọnụ ala dị ọnụ ala ga-adị adị na 2.020 | Akụkọ akụrụngwa
Onye nọ n’etiti Nokia 5G dị ezigbo nso
Ruo ọnwa ole na ole ugbu a, anyị na-agụ na mgbasa ozi dị iche iche na mpaghara anyị na Nokia ga-agbanye nnukwu ego na 5G. Ihe a na - ahụkarị n'etiti ọtụtụ ndị nrụpụta bu n'obi ịnọgide na - arụ ọrụ ma na - arụ ọrụ oge niile. Mana ekwesịrị ịmata na naanị Nokia nwara ikwenye nke a Ga - ewetara "5G" ọha na eze site na ama ndị ọzọ nwere ọnụ.
N'oge ụnyaahụ anyị enweela ike ịmara nke ahụ nkwupụta ndị a na-erukwu nso ịghọ ihe mere eme. Ihe ka ọtụtụ n'ime ụta ahụ bụ maka ndị nrụpụta Qualcomm ọhụrụ, nke a ga-eji na mgbakwunye na njedebe dị elu, smartphones ndị ọzọ dị n'etiti etiti.
Nokia ga - eme ka 5G dị ọnụ ala karịa
Dika na teknụzụ kachasị ọhụrụ na nke kachasị elu nke smartphones ji nwayọọ nwayọọ na-etinye, nke kachasịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsị adịkeke bụ nke mbụ na-enye ya. Dị ka iwu zuru oke, ịnwe ihe ọhụụ kachasị ọhụrụ pụtakwara na ọ dị mkpa itinye ego dị elu. Ọ bụ ihe nkịtị ịhụ ka esi enwe ụdị ọhụụ nke Samsung Galaxy S1o nke nwere 5G.
Ọ dị mma Nokia kwuru eme na ọ bụghị naanị mmadụ ole na ole ka ịnweta smartphone na teknụzụ njikọ 5G. Gwa teknụzụ a njikọ na ndị na-anwale ya nwere ike ịja mma, nwere ike ịbụ na-eru nso nke ọzọ "nkịtị" akpa. A nzọ, nke Nokia, nke nwere ike ịba uru iji nweta ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ya.
Ihe ohuru ohuru nke Qualcomm kere, ndi nhazi ya Snapdragon 865 na Snapdragon 765, ha nwere otu nhazi uzo doro anya na 5G, na kwa ọgụgụ isi. Abụọ n'ime teknụzụ kachasị elu na nke kachasị ewu ewu na ọnwa ndị na-adịbeghị anya. Karịsịa, Ogbe 765, ikekwe onye kacha dị ala n’ime ha abụọ, nwere ike ịbụ onye ahọpụtara na ndepụta Nokia ohuru nwere njikọ 5G.
Ekwentị Nokia nwere 5G ga-abata n'enweghị nsogbu na 2.020, ọ bụ ezie na anyị enweghị ụbọchị ọrụ, yana ọbụnadị aha ngwaọrụ ahụ. Awa ole na ole mgbe ị matara Nokia 8.2 na-esote, enwere ohere na a ga-ahọrọ ya iji tinye ihe ntanetị ọhụrụ Snapdragon 765. Echi anyị ga-ahapụ obi abụọ. Nokia ọ ga - alaghachi ọzọ site na 5G?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Onye nọ n’etiti Nokia 5G dị ezigbo nso
Smart Ọkà okwu Tetanụ: Elekere mkpuchi, ọkà okwu nwere Alexa na Qi chaja
Etu esi arịọ nkwụghachi maka ngwa ma ọ bụ egwuregwu na Storelọ Ahịa na Applọ Ahịa